China Aluminum Window Screen orinasa sy ny mpanamboatra |Shengsong
Efijery bibikely aluminiumdia ny vokatra écran nentim-paharazana izay manalavitra ny fampiasana bibikely ary miaro ny fianakavianao.Izy io dia mamela ny rivotra sy ny hazavana miditra amin'ny alàlan'ny fisorohana ny biby kely tsy ilaina.Ny karazana fanenomana dia fanenomana tsotra, izay manome fanokafana fanamiana sy rafitra mafy orina.Aluminum varavarankely efijery mankafy ny endri-javatra ny tsy harafesina sy tsy harafesina.Ankoatra izany, dia ampiasaina betsaka amin'ny haingon-trano, varavarana ary varavarankely izy io mba hisorohana ny moka, lalitra ary bibikely na bibikely hafa.
Savaivony tariby: BWG 31- BWG 34.
Haben'ny lavaka: 18 mesh × 18 mesh, 18 mesh × 16 mesh, 18 mesh × 14 mesh, 16 mesh × 16 mesh, 16 mesh × 14 mesh, 14 mesh × 14 mesh.
sakany: 18″, 24″, 30″, 36″, 48″, 60″, 72″.
Halavany: 30′, 50′, 100′ sy ny sisa.
Loko: mainty, volafotsy, saribao.
Ny fanoherana ny harafesina, ny hafanana, ny asidra, ny alkaline ary ny harafesina.
Fikorianan'ny rivotra ambony.
Misoroka ny bibikely.
Silver aluminium efijery bibikely no vokatra nentim-paharazana.Io no tena ara-toekarena indrindra amin'ny loko telo.
Ny efijerin'ny bibikely aluminium dia afaka manohitra ny harafesina sy ny harafesina, ka azo ampiasaina amin'ny toetr'andro mando na tontolo iainana izay manimba sy feno vovoka.Maharitra noho ny lamba fibre vera izy io, noho izany dia matetika ampiasaina ao amin'ny fianakaviana, trano fandraisam-bahiny ary trano ny lambam-baravarankely aluminium mba hisorohana ny bibikely sy ny bibikely, toy ny varavarankely, varavarana, lavarangana ary patio.
Efijery varavarankely aluminiumdia nanenona tamin'ny aluminium magnésium firaka tariby, antsoina koa hoe "aluminium manezioma firaka varavarankely efijery", "aluminium varavarankely efijery", aluminium varavarankely efijery dia volafotsy fotsy loko, harafesiny fanoherana, mety ho mando tontolo iainana. Aluminum varavarankely efijery azo hoso-doko amin'ny epoxy coating amin'ny loko isan-karazany, toy ny mainty, maitso, volondavenona volafotsy, mavo, manga sy ny sisa, noho izany dia antsoina koa hoe "epoxy coating aluminium efijery".
Ny efijery varavarankely aluminium dia tenona amin'ny tariby aluminium na tariby firaka aluminium-magnesium miaraka amin'ny harato fanokafana efamira.Noho izany, ny efijery bibikely aluminium dia antsoina koa hoe efijery tariby magnesium.Ny loko voajanahary dia fotsy volafotsy.Ary ny efijerin'ny varavarankelin'ny aluminium dia azo rakofana amin'ny epoxy coating amin'ny maitso, volondavenona volafotsy, mavo sy manga, na amin'ny saribao mifono loko mainty.
Aluminum varavarankely screening manana tombony maro, toy ny ao amin'ny efitrano mari-pana tsy mianjera, avo mari-pana 120 ° C tsy levona, anti-asidra sy anti-alkali, harafesiny fanoherana, tsy mamaly amin'ny oxidants, mety ho mando tontolo iainana, tsy harafesina na bobongolo, maivana lanja, rivotra tsara sy hazavana mikoriana, manana henjana tsara sy hery ambony.
Kianjan'ny bibikely aluminium fanokafana kianja no fitaovana malaza indrindra ampiasaina amin'ny fanindriana varavarankely na varavarana, ary fefy lamba amin'ny bibikely sy bibikely ao amin'ny hotely, trano fisakafoanana, tranoben'ny vondrom-piarahamonina ary trano fonenana.
teo aloha: Wire Mesh Square
Manaraka: Windows plastika
Fibre-fitaratra Windows Screening